हिलोको किलो निर्वाचन आयुक्त
काठमाडौं । पैसाको लेनदेन हुनथाल्यो, लोभलालचमा पार्ने र भोजभत्तेर ख्वाएर मतको दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसो नहोस् भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक पार्टी र नेताहरुलाई सावधान गराइरहेका छन् । सुरुमै आचारसंहिता दिइसकेपछि अहिले आएर केको खबरदार ? हिम्मत छ भने निर्वाचन आयोगमा भोटको किनबेच भएको, लोभलालच देखाएर भोट तानतुन पारेको, भोजभत्तेर ख्वाएका उमेदवारहरुको उमेदवारी रद्द गरिदिनु नि ।
भारतमा एउटा टीएन शेसनले निर्वाचनमा प्रष्टै देखिने धाँधली र आचारसंहिताको उल्लंघनमा कसैले चुँइक्क बोल्न नसक्ने गरी कारवाही थालिदिएकाले नजीर नै बस्यो र बाहिर कसैले पनि भोट खरिदविक्री गर्ने हिम्मत वर्षौंदेखि गर्न सकेका छैनन् ।
हाम्रा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन् कस्ता भने आचारसंहिता लागू गर्छन् तर सरकारले जतिसुकै उल्लंघन गरे पनि बोल्दैनन् । माओवादीको सिफारिसमा आयुक्त बन्ने अवसर पाएका यिनी र अन्य पार्टीका सिफारिसमा आयुक्त बनेकाहरु पनि अर्थबाट बजेट निकासा गराएर १२ करोडको गाडी चढेर मजा लुटिरहेका छन् । अचाक्ली भइसक्दा पनि प्रमुख आयुक्त भोटको खरिद विक्री नगर न भनेर सावधान भनिरहेका छन् । मानौं यी प्रमुख आयुक्त होइनन्, मात्र अधिकारविहीन वाचमेन हुन् । जो घण्टा घण्टामा टोलमा चोरी होला भनेर सावधान भन्दै लठ्ठीमात्र बजार्छन्, केही गर्न सक्देनन् ।
जप्नलाई यिनले गायत्री मन्त्र जपेजसरी कसैको पनि डर, धम्की र दबाबमा नभई भयरिहत वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनिरहन्छन् । र, आफै मतको दुरुपयोग भइरहेको खुलासा पनि गर्छन् । उनले यो राष्ट्रिय निर्वाचन लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि हो पनि भन्छन् । मतको खरिद विक्रीबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले कसरी संविधानको कार्यान्वयन गर्लान् ? प्रमुख आयुक्तले बताइदेलान् ?